Ubumfihlo - Ukulandwa kwemakethe yamahhala
Iseva yePetrPikora.com ngiyakwazi ukunikeza i-HSTS (HTTP Ukuphepha Okuqinile Kwezokuthutha). Ukuvikeleka okuThutha okuThutha okunamandla (I-HSTS) I-informatice bezpečnostní mechanismus, i-který chrání síťovou komunikaci mezi webovým prohlížečem isbovým serverem před downgrade útoky a zjednodušuje ochranu proti únosu spojení (tz. ukuphangwa kwekhukhi). I-Mechanismus iyinhlangano, i-server yethu isebenza ngokususa imithombo ye-intanethi noma i-HTTPS ibe yinkampani ye-intanethi ye-HTTP protokolem. I-HSTS ichaza i-RFC 6797. Webový server akhivuje HSTS iphutha HTTP inhlawulo Okuqinile-Ezokuthutha-Ezokuphepha, Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza i-server yakho iseva. HSTS pomáhá chránit webové aplikace proti některým pasivním (odposlechy) i-aktivním síťovým útokům. Ukuze uthole i-HSTS imenyu, sicela ukhethe umuntu-ngaphakathi-ngaphakathi, bese uchofoza, bese uchofoza bese ukhetha i-opharetha ngokusebenzisa i-webovou aplikací. Staráme se ošiši bezpečnost!
IWebsite yethu ubuthe ulwazi olulandelayo mayelana nokuvakasha kwakho:
Informace, i-intanethi ye-intanethi i-jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, případně přezdívku, e-mailovou adresu, popřípadě adresu webové stránky. Ukuze uthole ukwabelana nge-informace pro pro vúcast v komentářích ke článku, případě pro odběr od od vědě kěmto komentářům av návštěvní knize.
Bayahlala eqoqwe ulwazi (ie. Tholakele ngaphandle kwakho ngenkuthalo ukuhlinzeka ulwazi) ngokusebenzisa ubuchwepheshe obehlukene futhi izindlela, ezifana Uhlelo Olulawula Ukunikezelana amakheli, cookies, abanye Internet Tags. Lolu lwazi kuzovumela okuqukethwe kangcono umthungi ukuba abasebenzisi bethu futhi ngeke ukusiza abakhangisi babo kanye nabaxhasi baqonde kangcono izivakashi zethu .
Qaphela ukuthi isilinganiselwa esibukweni se-reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Inothi lomkhiqizo noma i-e-mail yakho, i-e-mail yakho i-telefoni yakho) i-e-mail yakho ishicilelwe ukuze usebenzise i-akhawunti yakho bese ukhetha i-akhawunti yakho, i-akhawunti yakho ye-imeyli.
-Google, njengoba party othengisa wesithathu, obusebenzisa ukuphakela izikhangiso kule amakhukhi site. DART cookie ye kwenza Google bangaphakela izikhangiso kubasebenzisi ngokusekelwe kuvakasha kwabo kule sayithi nezinye izingosi on the Internet.
Uživatelé se mohou po přečtení Inqubomgomo yemfihlo for ukukhangisa kanye Network sokuqukethwe Google I-DART ye-cookie yomkhiqizo we-poborů Zikhiphe ohlwini.
Iziphequluli eziningi ezibekwa ngokuzenzakalelayo ukwamukela amafayela cookie, kodwa isiphequluli sakho lingasethwa ukuze senqabele wonke amakhukhi noma ukuze sibonise ukuthi ikhukhi ithunyelwa. Ezinye izici namasevisi Google kungenzeka zingasebenzi kahle uma-cookies enziwe ukuthi angasebenzi.
Uma ufuna, ungakwazi nganoma yisiphi isikhathi abenqabayo amafayela amakhukhi i-Google Inc V Obsahové síti Google prostřednictvím Elahla ikhukhi le-DoubleClick.
I-Cookie yokuphuma yokuphuma I-Plugin yomuntu ongu-intanethi i-Firefox i-Internet Explorer záznam "I-cookie ye-DoubleClick", besebenzisa i-Googlem ye-inthanethi ye-intanethi noma ye-inthanethi.
Kulesi sigaba, kufanele usho i-URL yesayithi lakho, kanye negama lenkampani, inhlangano noma umuntu osebenza ngalolu sayithi kanye nolwazi lokuxhumana olufanele.
Inani lemininingwane oyodinga ukuyenza lizohluka ngokuya ngemithethonqubo ye-Europe noma yezwe. Isibonelo, kuzodingeka unikeze ikheli lomzimba, inombolo yesazisi yenkampani.
Doporučený umbhalo: Ikheli lethu lewebhu ngu: https://petrpikora.com.
Lokho esikuqoqa nokuthi kungani siwaqoqa
Kulesi sigaba, kufanele ubonise ukuthi yiluphi ulwazi lomuntu siqu oluqoqa kubasebenzisi kanye nezivakashi kusayithi lakho. Lokhu kungaba, isibonelo, idatha yokuthengiselana - ulwazi lokuthenga; idatha yobuchwepheshe - ulwazi lwekhukhi; nolwazi lomuntu siqu - ulwazi lwe-akhawunti yomsebenzisi nekheli le-imeyili.
Kumele futhi unikeze ulwazi mayelana nokuqoqwa nokugcinwa kwedatha yomuntu siqu ebucayi, njengedatha yezempilo.
Ngaphandle kokucacisa ulwazi lomuntu siqu oqoqayo, udinga ukukhombisa ukuthi kungani uqoqa. Lezi zincazelo kufanele zicabangele isisekelo somthetho sokuqoqwa nokugcinwa kwedatha yomuntu siqu noma imvume evumelekile yomsebenzisi.
Ulwazi lomuntu siqu aludalwanga kuphela ngokuxhumana nesayithi lakho. Idatha yomuntu siqu iphinde ikhiqizwe izinqubo zobuchwepheshe ezifana namafomu okuxhumana, amazwana, amakhukhi, ama-analytics, nedatha ehlanganisiwe yangaphandle.
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress ayitholi ulwazi oluthile olubonakalayo mayelana nezivakashi futhi liqoqa kuphela idatha eboniswe ekhasini lomqondisi "Iphrofayela" kubasebenzisi ababhalisiwe. Noma kunjalo, amanye ama-plug-ins akho angaqoqa ulwazi lomuntu siqu. Ngezansi kufanele ufake ulwazi olulandelayo ngezansi.
Kulesi sigatshana, kufanele ukhombise ukuthi yiluphi ulwazi olurekhodiwe ngamazwana. Ngezansi sihlinzeka ngolwazi ukuthi iyiphi iqoqo le-WordPress yedatha eliqokiwe.
Doporučený umbhalo: Lapho izivakashi ukwengeza amazwana kule webhusayithi, idatha eqoqwe ngesimo kuboniswe ukuphawula isiphequluli IP ikheli kanye ejenti yomsebenzisi string ngokuchaza okwengeziwe yesivakashi, esiza ukuthola spam.
I-Gravatar inganikezwa ngentambo engaziwa edalwe kusuka ekhelini lakho le-imeyili (eyaziwa nangokuthi hashi) ukunquma ukuthi usebenzisa le nsizakalo. Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Gravatar iyatholakala lapha: https://automattic.com/privacy/. Uma ukuphawula kwakho kuvunyelwe, isithombe sakho sephrofayela sibonakala emphakathini kumongo wamazwana wakho.
Kulesi sigatshana, kufanele ucacise ukuthi iyiphi idatha engashicilelwa kubasebenzisi abangalayisha amafayela omidiya. Wonke amafayela alayishiwe ngokuvamile atholakala esidlangalaleni.
Doporučený umbhalo: Uma ulayisha izithombe kule sayithi, kufanele ugweme ukulayisha izithombe ngemininingwane yendawo efakiwe (i-EXIF GPS). Izivakashi zesayithi zingalanda futhi zibuke noma iyiphi idatha yendawo kusuka kuzithombe kuwebhu.
I-WordPress ayifaki amafomu okuxhumana ngokuzenzakalelayo. Uma usebenzisa i-plug-in yokuxhumana, sebenzisa lesi sigatshana ukuze ubonise ukuthi iyiphi idatha yomuntu siqu ebhaliwe uma othile ethumela ifomu lokuxhumana nokuthi ugcina isikhathi eside kangakanani lolo lwazi. Isibonelo, ungase ukhombise ukuthi ugcina ulwazi olutholwe ifomu lokuxhumana isikhathi esithile sokusebenza kwamakhasimende, kodwa awusebenzisi lolu lwazi ngezinjongo zokuthengisa.
Kulesi sigatshana, kufanele ukhombise ukuthi yimaphi amakhukhi isayithi lakho eliyisebenzisayo, kuhlanganise nalabo abakha ama-plugin, ama-social media, kanye ne-analytics. Ngezansi ama-cookies afakwe yi-WordPress ngokuzenzakalelayo.
Doporučený umbhalo: Uma ungeza amazwana kusayithi lethu, ungasivumela ukuthi silondoloze igama lakho, ikheli le-imeyili, kanye newebhusayithi kumakhukhi. Ngale ndlela, sizama ukwandisa induduzo yakho uma ubhala amazwana amasha, ngakho ngeke usugcwalise futhi. Lawa makhukhi azohlala unyaka owodwa.
Uma unayo i-akhawunti futhi ungena ngemvume kule sayithi, setha ikhukhi yesikhashana ukuqinisekisa ukuthi isiphequluli sakho samukela amakhukhi. Lekhukhi ayinayo idatha yomuntu siqu futhi izokhanselwa uma isiphequluli sivaliwe.
Uma singena ngemvume, sabeka futhi amakhukhi amaningana ukugcina ulwazi lakho lokungena ngemvume nokusetha isikrini. Amakhukhi ahlanganisiwe anesikhathi sokuphila kwezinsuku ezimbili, futhi ukubonisa ama-cookies okwedlule unyaka. Uma uqinisekisa inketho ethi "Ngikhumbule", ukungena kwakho kuzothatha amasonto amabili. Uma ungena ngemvume ku-akhawunti yakho, amakhukhi angena ngemvume azosuswa.
Uma uhlela noma ushicilela isihloko, enye ikhukhi izogcinwa kusiphequluli sakho. Lekhukhi ayinayo idatha yomuntu siqu futhi ibonisa kuphela i-ID yokuthunyelwe okuvele uhlelile. Ukusebenza kwalo kuphelelwa yisikhathi ngemva kwezinsuku ze-1.
Kufakwe okuqukethwe kusuka kwamanye amasayithi
Doporučený umbhalo: Okuthunyelwe kule sayithi kungase kube nokuqukethwe okufakiwe (isibonelo, isiqophi, izithombe, izihloko, njll). Okushicilelwe okuvela kwamanye amawebhusayithi kuziphatha ngendlela efanayo nokuthi isivakashi sivakashele kwenye indawo.
Lezi amawebhusayithi siqoqe ulwazi olumayelana nawe usebenzisa ama-cookies, ngokubeka ezengeziwe third-party yokulandelela futhi ulandelele yokusebenza kwakho lokhu okuqukethwe obekiwe, kuhlanganise ukulandela ngomkhondo nokuxhumana nokuqukethwe obekiwe, uma une-akhawunti kanye ungene ku-website.
Kulesi sigatshana, kufanele ukhombise ithuluzi kohlaziyo oyisebenzisayo, ukuthi abasebenzisi ungaphuma kokulandela, futhi kufanele unikele ngesixhumanisi inqubomgomo yobumfihlo olunikezwa umhlinzeki kwakho amasevisi kohlaziyo.
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress ayiqoqi noma iyiphi idatha yokuhlaziya. Noma kunjalo, ama-akhawunti amaningi abamba iqhaza aqoqa idatha engaziwa. Ungase futhi ufake i-plugin ye-WordPress enikeza izinsizakalo zokuhlaziya. Kulesi simo, engeza ulwazi oluvela kule plugin lapha.
Okwabelana nabo ngemininingwane yakho
Kulesi sigaba kumele ahlinzeke igama uhlu lwabo bonke abahlinzeki third-party nobani idatha I-Web, kuhlanganise abalingani, amasevisi efu, kuphuma yokukhokha kanye isevisi yomuntu wesithathu abahlinzeki, kanyekanye ucacise ukuthi yiluphi ulwazi owabelana nabo futhi kungani. Uma kungenzeka, sicela iphinde ihlanganise nezinqubomgomo zawo zobumfihlo.
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress ayinikezi ulwazi lomuntu siqu kunoma ubani.
Kulesi sigaba, kufanele uchaze ukuthi ugcina isikhathi esingakanani idatha yakho eqoqwe noma esetshenzwa yili sayithi. Ngenkathi kudingeke ukuba ube nesimiso, ngolwazi ukuthi ugcina isikhathi esingakanani sedasethi ngayinye nokuthi kungani uyigcina, lolu lwazi lungabonakali lapha. Isibonelo, ungase ufune ukukhombisa ukuthi ugcina amarekhodi akho efomu lokuxhumana ezinyangeni eziyisithupha, idatha yokuhlaziywa yonyaka owodwa, kanye namarekhodi okuthenga amakhasimende iminyaka eyishumi.
Doporučený umbhalo: Uma ungeza amazwana, amazwana kanye nemethadatha yayo izogcinwa kuze kube phakade. Idatha igcinwe ngenhloso yokuzitholela ngokuzenzakalelayo zonke izimvo ezilandelayo esikhundleni sokuzigcina emgqeni wokulinganisela.
Kubasebenzisi abhalisa kule sayithi (uma babe nalolu khetho), futhi sigcina ulwazi lomuntu siqu olunikezayo kuphrofayela yakhe yomsebenzisi. Bonke abasebenzisi bangabona, bahlele, noma basuse ulwazi lwabo lomuntu siqu nganoma isiphi isikhathi (ngaphandle kokuthi abakwazi ukuguqula igama lomsebenzisi). Abaphathi bewebhu bangabuka futhi bahlele lolu lwazi.
Kulesi sigaba, kufanele uchaze ukuthi yiziphi abasebenzisi bamalungelo abaphethe idatha yabo nokuthi bangabancenga kanjani.
Doporučený umbhalo: Uma une-akhawunti kule sayithi noma wena ngokungeza amazwana, ungabhalisela ukuthola ifayela kolwazi lomuntu siqu ukuba sibambelele ngawe, kuhlanganise lonke ulwazi ukuthi osinikeze lona. Ungase futhi ucele ukukhishwa nganoma imiphi imininingwane yomuntu okuyinto sibambelela ngawe. Lolu khetho akubandakanyi ulwazi ukuthi ziyadingeka ukugcina zokuphatha, yezizathu zomthetho noma zokuphepha.
Uthumelaphi idatha yakho?
Lesi sigaba kufanele sibhale zonke ukudluliselwa kwedatha mayelana nesayithi lakho ngaphandle kweYurophu YaseYurophu futhi uchaze ukuthi lezi datha zivikelwe kanjani amazinga wobumfihlo aseYurophu. Lesi sigaba singabandakanya ukusingathwa kwakho kuwebhu, isitoreji sefu, noma ezinye izinsizakalo zomuntu wesithathu.
Umthetho wase-Europe yokuvikela idatha kudinga ukuthi ulwazi mayelana yomphakathi waseYurophu ukuthi zidluliselwa kwe-European Union zivikelwe imithetho efanayo nemithetho sengathi idatha zazisekelwe eYurophu. Ngakho-ke, ngaphezu ngokubeka idatha yendawo, kufanele uchaze indlela ozizwa ukuqinisekisa ukuthi lezi zilinganiso zifeziwe, noma nguwe noma besithathu, kungakhathaliseki isivumelwano ezifana ukuvikelwa ubumfihlo lekhontile imodeli izivumelwano noma ngibopha imithetho yenkampani .
Doporučený umbhalo: Ukuphawula kwezivakashi kungaskenwa ngensizakalo yokuthola ukugaxekile okuzenzakalelayo engatholakala ngaphandle.
Kulesi sigaba, kufanele unikeze indlela yokuxhumana yokukhathazeka kwangasese. Uma kudingeka ukuba ube ne-agent, sicela unikeze negama labo nemininingwane yokuxhumana egcwele.
Uma usebenzisa i-website ngezinhloso zezohwebo futhi uhileleke ekuqoqeni okuyinkimbinkimbi noma ekusetshenzisweni kolwazi lomuntu siqu, kufanele futhi unikele ngolwazi olulandelayo ezinkambisweni zakho.
Indlela esivikela ngayo ulwazi lakho lomuntu siqu
Kulesi sigaba, kufanele uchaze ukuthi yiziphi izinyathelo ozithathile ukuvikela idatha yomsebenzisi. Isibonelo, unganikeza ulwazi mayelana nezinyathelo zobuchwepheshe, njengokuthi: ukubethela; izinyathelo zokuphepha ezifana nokuqinisekiswa kwezinto eziningi; nezinye izinyathelo ezinjengokuqeqeshwa kwabasebenzi endaweni yokuvikela idatha yomuntu siqu. Uma wenze ukuhlolwa komthelela wobumfihlo, ungaphinda ubhekise.
Iyiphi inqubo yokuvuza kolwazi?
Kulesi sigaba kumele uchaze ukuthi izinqubo ayatholakala ukubhekana idatha ukuvuza, noma ngempela noma kungenzeka kube nokungqubuzana, ezifana yokubika izinhlelo zangaphakathi, izindlela yokuxhumana noma umvuzo ekutholeni amaphutha.
Yimaphi amaqembu wesithathu esiqoqa idatha yomuntu siqu?
Uma isayithi lakho lithola idatha yomsebenzisi wesithathu, kufaka phakathi abakhangisi, lolu lwazi kufanele lufakwe esigabeni sesaziso sakho semfihlo esibhekene nolwazi lwesithathu.
Yisiphi isinqumo esizenzekelayo esizenzayo kanye / noma idatha yomsebenzisi wephrofayela
Uma yakho inikeza ngamasevisi ezifaka isinqumo okuzenzakalelayo - ngokwesibonelo, okuvumela amakhasimende isicelo sesikweletu noma ukuqoqa idatha kuphrofayela ukukhangisa - kufanele abeke lezi izinqubo, futhi zihlanganisa ulwazi kanjani lolu lwazi isetshenziswa, yini eyenza isinqumo kulezi idatha uquqaba futhi amalungelo abo abasebenzisi izinqumo ngaphandle kokuqondiswa umuntu.
Isibopho solwazi sembonini elawulwayo
Uma uyilungu lemboni elawulwayo noma uma ungaphansi kweminye imithetho yobumfihlo, ungase ucelwe ukunikeza ulwazi oludingekayo.
Inqubomgomo yemfihlo for PetrPikora.com
Uma udinga olunye ulwazi oluthe xaxa noma unemibuzo mayelana nobumfihlo inqubomgomo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi nge-imeyili at Inqubomgomo.
At www.PetrPikora.com thina Cabanga Ubumfihlo izivakashi zethu ukuze sibaluleke kakhulu. Lo mbhalo Ingqubomgomo yobumfihlo likuchaza ngokuningiliziwe Types of imininingwane yabantu eqoqwe futhi irekhodwe ngalokuhlelekile www.PetrPikora.com futhi sisisebenzisa kanjani.
Njengezinye izingosi eziningi Web, www.PetrPikora.com kwenza ukusetshenziswa amafayela log. La mafayela Merel ufake izivakashi kusayithi - Ngokuvamile inqubo standard ukuze izinkampani ibamba futhi zibe ingxenye ibamba analytics amasevisi sika. Ulwazi ngaphakathi amafayela log kuhlanganisa internet protocol (IP) amakheli, uhlobo lwesiphequluli, Umhlinzeki Service Inthanethi (ISP), usuku / isitembu sesikhathi, Ebhekisela / ophumayo amakhasi, futhi Mhlawumbe isibalo ukuchofoza. Lolu lwazi lusetshenziselwa The bacubungula, ukuphatha site, ukunyakaza track yomsebenzisi emhlabeni site, abuthele imininingwane emayelana. amakheli IP, isomiso kanye neminye imininingwane kungukuthi kuhlobene nanoma yiluphi olunye ulwazi okhonjwa.
www.PetrPikora.com isebenzisa amakhukhi ukugcina ulwazi mayelana izivakashi 'preferences, olwazini irekhodi umsebenzisi-ethize ngalo emakhasini isivakashi site efinyelela noma kuvakasha, nokwenza ngezifiso noma ngokwezifiso ikhasi lewebhu okuqukethwe ezisekelwe phezu yezivakashi uhlobo lwesiphequluli, noma eminye imininingwane isivakashi uthumela nge browser yabo.
→ I-Google, njengomthengisi wesithathu, isebenzisa amakhukhi ukuhambisa izikhangiso ku-www.PetrPikora.com.
Ukusetshenziswa kwe-Google kwekhukhi ye-DART ivumela ukuthi ihambise izikhangiso kuzivakashi zethu zesayithi ngokususelwa ekuvakasheni kwabo ku-www.PetrPikora.com nakwamanye amasayithi e-intanethi.
→ Abasebenzisi ukuphuma ukusetshenziswa ikhukhi DART ngokuvakashela inqubomgomo yobumfihlo ye-Google isikhangiso kanye inethiwekhi okuqukethwe at the URL Ukulandela - http://www.google.com/privacy_ads.html
Ezinye esisebenza nabo Kwangathi zisebenzise ama-cookies kanye web beacons kusayithi lethu. Ozakwethu zokukhangisa zihlanganisa .......
Nakuba ngasinye salezi abalingani ukukhangisa Has Yazo Inqubomgomo yemfihlo for site Lwabo, yithuluzi olusha futhi hyperlinked inakekelwa lapha: Izinqubomgomo Inqubomgomo.
Kwangathi nawe uthintane lolu hlu ukuthola inqubomgomo yobumfihlo kangakanani ukuba ngamunye abalingani ukukhangisa www.PetrPikora.com.
www.PetrPikora.com ayinakho ukufinyelela noma ukulawula amakhukhi isiphakamiso ezisetshenziswa Abakhangisi third-party.
Kufanele uxhumane nenqubomgomo yemfihlo yalowo nalowo Lezi lweziphakeli third-party for ulwazi okuningiliziwe olubanzi ezenzweni zabo kanye imiyalelo mayelana nendlela ukuphuma imikhuba ethile. Ingqubomgomo yobumfihlo www.PetrPikora.com sika asisebenzi, futhi asikwazi ukulawula Imisebenzi, isomiso noma ezinye Abakhangisi amasayithi ewebhu. Ungase uthole uhlu olunzulu Izinqubomgomo isiphakamiso Inqubomgomo futhi links Zabo lapha: Inqubomgomo yemfihlo Links.
Uma ufisa ukuvimbela amakhukhi, nenza kanjalo ngokusebenzisa May Individual ongakhetha isiphequluli sakho. Ngolwazi oluthe xaxa mayelana nokuphathwa khukhi iziphequluli web ethize zingatholakala at website iziphequluli 'abafanele. Ayini ama-cookie?
Sikholwa ukuthi kubalulekile ukunikeza ukuvikeleka okungeziwe kubantwana ku-intanethi. Sikhuthaza abazali kanye nabaqaphi ukuba bachithe isikhathi esiteshini nezingane zabo ukuze bagcine, bahlanganyele futhi / noma baqaphe futhi baqondise umsebenzi wabo we-inthanethi. I-www.PetrPikora.com ayitholi ngokugcwele ulwazi oluthile olubonakalayo kusuka ezinganeni ezingaphansi kwe-13. Uma umzali noma umlondolozi ekholelwa ukuthi i-www.PetrPikora.com ine-database yayo ulwazi lomuntu siqu olungabonakali lomntwana oneminyaka engaphansi kwe-13, sicela uxhumane nathi ngokushesha (usebenzisa oxhumana naye esigabeni sokuqala) futhi sizosebenzisa imizamo yethu emihle kakhulu ukususa ngokushesha lolo lwazi kumarekhodi ethu.
Komgomo Wobumfihlo ngale Isebenza kuphela Imisebenzi yethu inthanethi futhi isebenza for izivakashi website yethu futhi wabelane ulwazi Ngokuphathelene kanye / noma eziqoqiwe khona. Le nqubomgomo ayisebenzi kunoma yiluphi ulwazi Okuqoqwe okungaxhunyiwe ku-intanethi noma nge iziteshi ukwedlula le webhusayithi.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo igcine ukubuyekezwa nge: NgeSonto, Agasti 27th, 2017.
Lolu lulimi lwesampula lubandakanya izinsisekelo zedatha yomuntu siqu isitolo sakho esingase siqoqe, sigcine futhi sabelo, kanye nokuthi ubani ongakwazi ukufinyelela kulowo datha. Kuye ngokuthi yimaphi amasethingi anikwe amandla futhi yiziphi ama-plugin ezengeziwe asetshenzisiwe, ulwazi oluthile olubiwe esitolo sakho luzohluka. Sincoma ukubonisana nommeli uma sinquma ukuthi yiluphi ulwazi oluzokwethula emthethweni wakho wobumfihlo.
Siqoqa ulwazi ngawe ngesikhathi senqubo yokuhlola esitolo sethu.
Sizophinde sisebenzise amakhukhi ukugcina ithrekhi yenqola yakho okuqukethwe ngenkathi upheqa isayithi lethu.
Qaphela: Ungase ufise ukuchaza kabanzi inqubomgomo yakho ye-cookie nesixhumanisi kuleso sigaba kusuka lapha.
Ngokuvamile sigcina ulwazi mayelana nawe uma nje sidinga ulwazi ngezinhloso esiziqoqa ngazo futhi siyisebenzise, ​​futhi asidingeki ngokomthetho ukuqhubeka siwugcina. Isibonelo, sizogcina imininingwane ye-oda ngeminyaka engu-XXX ngezinhloso zentela nokubika. Lokhu kuhlanganisa igama lakho, ikheli le-imeyli kanye namakheli okukhokha nokuthumela.
Kulesi sigaba kufanele uhlenge ukuthi ubani owabelana naye idatha, futhi ngenjongo ngayiphi. Lokhu kungafaka, kodwa kungagcini, ukuhlaziywa, ukumaketha, izindlela zokukhokha, abahlinzeki bokuthumela, kanye nokufakwa kwamanye amazwe.
Sokwabelana ngolwazi nabantu besithathu abasisiza ukuthi sinikeze imiyalo yethu futhi sisebenze amasevisi kuwe; isibonelo -
Kulesi sigatshana kufanele ubhale ukuthi yiziphi izinqubo zokukhokha ezivela eceleni ozisebenzisela ukukhokha esitolo sakho ngoba lezi zingase zisebenzise idatha yamakhasimende. Sifake i-PayPal njengesibonelo, kodwa kufanele ususe lokhu uma ungasebenzisi i-PayPal.
Ngokusebenzisa lesi sandiso, ungase ugcine idatha yomuntu siqu noma wabelane ngedatha ngenkonzo yangaphandle. Funda kabanzi mayelana nokuthi lokhu kusebenza kanjani, kuhlanganise nokuthi yini ongase ufune ukuyifaka kwinqubomgomo yakho yobumfihlo.
Umthombo: Slider Revolution
Uma ngabe usebenzisa ama-Google Web Fonts (okuzenzakalelayo) noma udlala amavidiyo noma umsindo nge-YouTube noma i-Vimeo ku-Slider Revolution, sincoma ukuthi ungeze imisho yombhalo ohambelana namaphoyisa wakho wobumfihlo:
Isayithi lethu lisebenzisa ama-plugin kusuka ku-YouTube, asebenza yi-Google. Umqhubi wamakhasi yi-YouTube LLC, i-901 Cherry Ave., iSan Bruno, i-CA 94066, e-USA.
Uma uvakashela elinye lamakhasi ethu aqukethe i-plugin ye-YouTube, ukuxhumeka kumaseva we-YouTube kusungulwe. Lapha iseva ye-YouTube yaziswa mayelana namakhasi ethu owavakashele.
Uma ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-YouTube, i-YouTube ikuvumela ukuba uhlobanise ukuziphatha kwakho kokuphequlula ngokuqondile nephrofayela yakho. Ungavimbela lokhu ngokuphuma ngemvume ku-akhawunti yakho ye-YouTube.
I-YouTube isetshenziselwa ukwenza iwebhusayithi yethu ibonakale. Lokhu kubangela isithakazelo esifanele ngaphansi kuka-Art. I-6 (1) (f) i-DSGVO.
Ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusingatha idatha yomsebenzisi lungatholakala ekumemezeni kokuvikela idatha kwe-YouTube ngaphansi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa izici ezinikezwe i-Vimeo ividiyo i-portal. Le sevisi inikezwa nguVimeo Inc., i-555 West 18th Street, eNew York, eNew York 10011, eU.SA.
Uma uvakashela elinye lamakhasi ethu aqukethe i-Vimeo plugin, ukuxhumeka kumaseva we-Vimeo kusungulwe. Lapha iseva ye-Vimeo yaziswa ukuthi yimaphi amakhasi ethu owavakashele. Ngaphezu kwalokho, u-Vimeo uzothola ikheli lakho le-IP. Lokhu kusebenza futhi uma ungangeni ngemvume ku-Vimeo uma uvakashela i-plugin yethu noma ungenayo i-akhawunti ye-Vimeo. Ulwazi ludluliselwa kwisiphakeli seVimeo e-US, lapho igcinwa khona.
Uma ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Vimeo, i-Vimeo ikuvumela ukuba uhlobanise ukuziphatha kwakho kokuphequlula ngokuqondile nephrofayela yakho. Ungavimbela lokhu ngokungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Vimeo.
Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nendlela yokusingatha idatha yomsebenzisi, sicela ubheke Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Vimeo https://vimeo.com/privacy.
Amafonti e-Google Web
Ukuze uthole ukufaniswa kwamafomu okufaniswayo, leli khasi lisebenzisa amafonti ewebhu anikezwe yi-Google. Uma uvula ikhasi, isiphequluli sakho silayisha amafonti ewebhu adingekayo kwisilondolozi sakho sesiphequluli ukubonisa imibhalo namafonti ngendlela efanele.
Ngenxa yalokhu isiphequluli sakho kufanele senze ukuxhumana okuqondile kumaseva we-Google. Ngakho-ke i-Google iyaqaphela ukuthi ikhasi lethu lewebhu lifinyelelwe ngekheli lakho le-IP. Ukusetshenziswa kwamafayili e-Google Web kwenziwa ngenhloso yesethulo esifanayo nesimnandi se-plugin yethu. Lokhu kubangela isithakazelo esifanele ngaphansi kuka-Art. I-6 (1) (f) i-DSGVO.
Uma isiphequluli sakho singasekeli amafonti ewebhu, ifonti evamile isebenzisa ikhompyutha yakho.
Ulwazi olungaphezulu mayelana nokusingatha idatha yomsebenzisi, lungatholakala ku https://developers.google.com/fonts/faq futhi kumgomo wobumfihlo we-Google ku https://www.google.com/policies/privacy/.
Emakhasini ethu, ama-plugin we-SoundCloud yenethiwekhi yomphakathi (SoundCloud Limited, uBerners House, i-47-48 Berners Street, i-London W1T 3NF, UK) ingahlanganiswa. Ama-Plugin SoundCloud angabonwa yi-SoundCloud logo kusayithi lethu.
Uma uvakashela isayithi lethu, uxhumano oluqondile phakathi kwesiphequluli sakho ne-SoundCloud iseva sisungulwa nge-plugin. Lokhu kuvumela i-SoundCloud ukuthola ulwazi oluvakashele isayithi lethu kusuka ekhelini lakho le-IP. Uma uchofoza izinkinobho ethi "Like" noma "Yabelana" ngenkathi ungena ku-akhawunti yakho ye-SoundCloud, ungaxhuma okuqukethwe kwamakhasi ethu kuphrofayli yakho ye-SoundCloud. Lokhu kusho ukuthi i-SoundCloud ingahlobanisa ukuvakashela amakhasi ethu nge-akhawunti yakho yomsebenzisi. Sithanda ukukhomba ukuthi, njengomhlinzeki wamakhasi, asinalo ulwazi lokuqukethwe kwedatha edlulisiwe noma ukuthi izosetshenziswa kanjani yi-SoundCloud. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nenqubomgomo yobumfihlo ye-SoundCloud, sicela uye ku-https: //soundcloud.com/pages/privacy.
Uma ungafuni i-SoundCloud ukuhlobanisa ukuvakashela kwakho kusayithi lethu nge-akhawunti yakho ye-SoundCloud, sicela ungene ku-akhawunti yakho ye-SoundCloud.